बूढानीलकण्ठमा र्‍यापिड टेस्टबाट १ युवतीमा काेराेना पोजेटिभ देखियो, थप परीक्षण टेकुमा …….(भिडियो सहित) «
बूढानीलकण्ठमा र्‍यापिड टेस्टबाट १ युवतीमा काेराेना पोजेटिभ देखियो, थप परीक्षण टेकुमा …….(भिडियो सहित)
Published : 16 April, 2020 3:57 pm
ती युवतीलाई थप परीक्षणका लागि टेकु अस्पताल पठाइएको र थप जानकारी टेकु अस्पतालले रिपोर्ट दिएपछि बताउन सकिने नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुमार दाहाल जानकारी दिएका छन् । संक्रमण पोजिटिभ देखिएका बुढानिलकण्ठ-९ बस्ने ती युवती इटाली हुँदै नेपाल आइपुगेको र २ हप्ता क्वारन्टाइनमा बसेको बताइएको छ । तर उनमा हालसम्म कोरोनाको कुनै पनि लक्षण भने देखिएको छैन ।
उनले नेपाल भित्रिएकाे २२ दिनपछि टेकु अस्पतालमा फोन गरेर बुझ्दा चिकित्सकले उनलाई लक्षण केही नदेखिएकाले परीक्षण गर्न नपर्ने बताएका थिए । त्यस बीचमा उनले आफन्तलाई भेटेको बुझिएको छ । बुधबार भने उनी आफैं नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको र्‍यापिड टेस्ट शिविरमा जाँच गराउन पुगेकाे नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुमार दाहालले बताए ।